Petition · It is time the Zimbabwe Electoral Commission set up the Diaspora registration and vote for the 2018 elections. · Change.org
Zimbabwe Diaspora Vote registration and vote for the 2018 General Elections
This petition had 1,526 supporters
DiasporaVote2018 started this petition to Zimbabwe Electoral Commission and 1 other
Analysts state that there are more than three-four million patriotic, loving Zimbabweans living outside Zimbabwe. These are university students, doctors, teachers, husbands, wives, children who still want to be part of the political system in Zimbabwe, most especially by voting for the government to lead their beloved nation.
Unfortunately, this God-given right has been denied by the Zimbabwe Electoral Commission and the government not aligning the electoral laws of Zimbabwe with the 2013 constitution.
We demand for the Zimbabwean government to establish the diaspora vote in all nations around the world where Zimbabweans reside.
This petition will be represented to the Zimbabwe Constitutional Court as evidence to the need and desire by people in the diaspora to vote.
It is time the Zimbabwe Electoral Commission set up the Diaspora registration and vote for the 2018 elections.
Today: DiasporaVote2018 is counting on you
DiasporaVote2018 needs your help with “It is time the Zimbabwe Electoral Commission set up the Diaspora registration and vote for the 2018 elections.”. Join DiasporaVote2018 and 1,525 supporters today.